Raha vao nanomboka nanao an-tsofina ho an’ny olona eo an-toerana aho dia tsy hitako izay tokoni hamerenako azy. Natahotra aho raha toa ka nandoa ny fotoana tena lanjan’ny zanako aho fa tsy dorëzim ahy izy ireo. Saingy, manao zavakanto matihanina aho. 45 cent monja no nataoko afa-tsy ny iray tamin’ny asako voalohany. Tamin’izay no tsapako fa fotoana izao handinihana ny vidin’ny prmimet ahy.
Nanao hadisoana mitovy aho tamin’izaho nanomboka namorona tranokala sy nanao fanoratana votoaty. Satria tsy azoko antoka hoe ahoana no hanombatombanana ny halavany amin’ny famitana tetikasa iray, nefa ny mpanjifa mety hila nindramina dia nohamaivaniko izay tokoni andoavana vola. Rehefa tonga amin’ny faran’ny tetikasa lehibe ianao dia manangona ireo isa ary mahatsapa fa afaka nanao mihoatra ny karama farany ambany ianao dia mianatra lesona sarobidy momba ny vidiny.
Antenaina fa ity lahatsoratra ity dia hanampy Anao hametra NY tahan’ny fitomboana ho an’ny vokatra sy NY serivisinao amin’ny andro voalohany sokafy NY blôginao na NY orinasa ary TSY ho afaka hiatrika ireo olana ireo ihany izahay sy i Jen.
1.1 Produkte dixhitale
2 Ny zava-mjerë marinë
3.2 Video Lesona / Atrikasa
Ohatra, azonao atao ny mandeha çdo amin’ny tranokalan’ny mpifaninana aminao ary ho hitanao fa mandoa 20 $ / ora izy mandritra n fanofanana ho an’ny tena manokana. Na izany aza, manana traikefa bebe kokoa ianao 10 an-tsaha mihoatra noho izy ary manana mari-pahaizana efa mandroso ianao. Mazava ho azy fa mety handoa vola kely fotsiny ianao amin’ny serivisy.
Tena zava-dehibe tokoa ny manao lisitra antsipirihany ny ain’ny olona ao amin’ny faritra na nike anao. Tsy te-hiakatra be loatra amin’ny tenanao ianao raha tsy mahazo asa. Ianao koa dia tsy te-hanome vidiny ny tenanao ho ambany loatra satria miasa pennies amin’ny ora ianao.
Amin’ny farany, ny vokatra dia somar sarotra kokoa noho ny serivisy / entana nomerika satria azo inoana fa mifaninana amin’ny fivarotana lehibe toa ny Amazon.com ary na ny fivarotana biriky sy morte aza. Tsy maintsy mandanjalanja ianao hoe ohatrinona no vonona handoa. Mety ho tsara ny farafaharatsiny misy fangarony vokatra sy kojakoja nomerika na hisoratra anarana ho an’ny fandaharan’asa mifandray ka somary kely loatra ny saram-bolanao ary misy tombony rehetra ny varotra rehetra.
Ny vidin’ny vokatra nomerika dia mihoatra ny ohatry ny fotoana misy anao. Mila mandinika hoe inona ny lanjan’ny fampahalalana ny mpanjifa. Tsy azo atao ihany koa ny haminavina ny ho fivarotanao. Iray volana, mety hivarotra ero 100 sy ny 2 manaraka ianao.
Ny zava-mjerë marinë
Fahafantarana an-tsokosoko ny varotra fa tokony hanome vidiny foana ianao amin’ny marika 99 cent noho ny marika dolara manontolo. Ny fahasamihafana dia tsy misy, fa ho gaga ianao hoe zjarr ny olona mijery ny vidin’ny $ 9,99 ary mieritreritra fa eo ambanin’ny $ 10 fa tsy manodikodina.
KISSmetrics dia nijery akaiky ny psikolojika tao ambadiky ny vidin’ny vidiny ary nahita fa miasa io tetika io. Amin’ny fampiasana ny herin’ny fomba 9 manerana ny fikarohana samihafa 8, dia hitan’ny mpikaroka izany Ny fivarotana dia nitombo tamin’ny 24%.
Nanohy nanao fanandramana ny MIT sy ny Oniversite ao Chicago ary nahita fa ny vidiny miaraka amin’ny isa 9 ao amin’izy ireo dia tena mampihena ny vidiny hafa, na dia mihena aza ny vidiny hafa. Nisedra ny fitafian’ny vehivavy izy ireo amin’ny 34 $, 39 $, ary $ 44. Ny entana 39 $ dia mivoaka ny hafa.
Ny fialan-tsasatrao amin’ity dia raha saika $ 9 ny vidinao, tokoni hampakatra ny vidin’ny 9,99 $ ihany ianao. Mety hivarotra tsaratsara kokoa, na dia manakarama dolara aza ianao.
Ohatra amin’ny tena fiainana: InMotion Hosting nanavao ny vidiny ao amin’ny 2018. Mariho hoe zjarrtë ny "9" jo moj e keqe e marra /
Ny vokatra iray iraisan’ny tompon’ny tranonkala hamidy amin’ny mpamaky azy dia ny ebook. Ebooks Ny saran’ny sy ny mpitarika dia mety tsy mitovy karama, arakaraka ny votoatiny, ka tokony hianatra izay ambaran’ny mpifaninana aminao amin’ny vokatra nomerika.
Ny World Book World dia nitatitra to amin’ny 2013 fa ny salanisan’ny vidin’ny mpivarotra ebook dia eo anelanelan’ny $ 3.00 $ 7,99 $ ose më shumë se sa më shumë foronina. Saingy, në mes amin’ny alàlan’ny toeram-pivoahana nentim-paharazana lodër ny Barnes & Nook Noble dhe Amazon Kindle. Mety ho hitanao fa mifanakaiky akaiky ny tahan’ny $ 10 np mpifaninana aminao amin’ny vokatra nomerika.
Na dia tsara aza ny manana fitsipi-pitondran-tena amin’ny vidiny, aza mamela ny tenanao ho Tonga pigeonholed. Raha ianao irery no olona manana fahalalana manokana na fahaiza-manao manokana izay tadiavin’ny olona hianatra bebe kokoa momba izany, dia amboary ny vidinao.
Video Lesona / Atrikasa
Tamin’ny volana Aogositra, 2014, Dorrie Clark dia nanoratra lahatsoratra iray ho an’i Forbes izay nijery ny sasany tamin’ireo ny vidin’ny saram-pianarana an-tserasera. Mpitsikaroka, loder ny mpanolotsaina ara-bola iray nindramina avy amin’ny $ 47- $ 197 ho an’ny ora 2-3.
Raha mampiasa sehatra lodër ny Udemy ianao ary manana traikefa goavana sy tsara, dia mety ho $ 10,000 amin’ny vola miditra.
Sipërmarrësi Araka ny, më shumë se 40 dollarë më shumë $ 60 $ më shumë se $ 60 isan’ora ho an’ny fahaiza-manaonao (eny, na amin’ny aterineto na amin’ny fivoriana an-tariby).
Mandritra izany fotoana izany, raha mitady hevitra manokana momba ny serivisy IT ianao dia mety handoa vola tahan’ny fidirana ao amin’ny 175 $ isaky ny ora ary mihoatra ny 294 $ iray ora miaraka amin’ny traikefa.
Ireo ohatra voalaza etsy ambony dia manome teboka anao hanapa-kevitra izay tianao handoa, fa amin’ny farany dia mila manandrana ny tsenanao sy ny demografika tianao hitranga raha toa ka hiasa ho an’ny indostriananao sy ny orinas.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia tokony ho hitanao mazava tsara hoe inona no vidin’ny tsena izay mitondra anao mbola manome anao fiainana azo ekena.
不知道是谁，还是我想死了，我是谁？ Amin’ny alalan’ny fampivoarana ny fifandraisanao amin’ny mpamaky anao ihany no haha​​fahanao manatratra ny